Shacabka dalka Itoobiya oo saaka doorasho u dareeray | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shacabka dalka Itoobiya oo saaka doorasho u dareeray
Shacabka dalka Itoobiya oo saaka doorasho u dareeray
Shacabka dalka Itoobiya ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta, si ay u doortaan Xildhibaanada Golaha Deegaanka iyo Heer Federaal. Doorashada Baarlamaanka ee dalkaasi ayaa waxaa ku tartamaya 47 xisbi, oo ku loomaya shan boqol, afartan iyo toddobo kursi oo Baarlamaanku ka kooban yahay.
Doorashadan oo lagu waday in la qabto sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay xaaladda ka dhalatay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Doorashada ayaana maanta ka dhaceysa inta badan Dowlad Deegaanada dalkaasi, marka laga soo taggo Dowlad Deegaanka Soomaalida, Magaalada Harar iyo gobolka ay dagaaladu ka socdaan ee Tigray.
Guddiga Doorashada ayaa sheegay in Dowlad Deegaanka Soomaalida iyo Magaalada Harar ay doorashadu ka qabsoomi doonto bisha September ee sanadkan.
Doorashadan ayaa ku soo aadaysa, xilli waqooyiga Itoobiya uu ka socdo dagaal u dhaxeeya militariga dalkaasi iyo xoogag taabacsan Ururkii TPLF ee ka arriminayay Gobolka Tigray.
Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ayaa wajahaya cadaadis calaami ah, oo ku aaddan sida uu maamulkiisu u wajahay dagaalka Gobolka Tigray.
Doorashadan ayaa noqonayso tii lixaad ee dalkaasi laga qabto tan iyo sanadkii 1995, waana doorashadii ugu horeysay ee dadka dalkaasi u dareeraan, tan iyo markii uu xafiiska qabtay Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed, sanadkii 2018.
Previous articleRooble oo magacaabay Guddiga Amniga Doorashada
Next articleLafta-gareen oo la kulmay Saraakiisha amniga ee Waajid (SAWIRRO)